I-Portella della Venere, ikhaya leholide - I-Airbnb
I-Portella della Venere, ikhaya leholide
San Giovanni Gemini, i-Italy
I-indlu yeholidi ephelele ibungazwe ngu-Lisa
Itholakala eSan Giovanni Gemini (Ag), enhliziyweni yezintaba zaseSicani, iPortella della Venere, okuyigama elizuzwe njengefa kwenye yezindlela ezinhle kakhulu zaseMonte Cammarata, ifulethi lokwamukela abantu, elitholakala esitezi sesi-5 eline-lifti, endaweni yokuphumula. ukulungiswa yesimanje kanye yamuva. Isilungiselelo esihle, esinikezwe ukunakwa kwemininingwane nangesitayela sesimanjemanje, singahlalisa abantu abangafika kwabangu-6 ngokunethezeka. Inamakamelo okulala athokomele angu-2, umbhede omkhulu usofa egumbini lokuphumula, amagumbi okugezela angu-2 kanye nekhishi elikhulu elinezinto zonke.
Izivakashi zamukelwa egumbini lokuhlala elikhulu nelikhanyayo lapho, ngenxa yamafasitela amakhulu, kufinyelelwa kuwo amathalasi amabili abanzi okuzobukwa kuwo imibono ebabazekayo: kusukela ohlangothini olusempumalanga izintaba zaseMadonie kanye nentaba-mlilo i-Etna; ngasentshonalanga, umbono ovusa amadlingozi wentaba enkulukazi namadolobhana ase-San Giovanni Gemini naseCammarata, lena eqhwakele eweni, echazwa abaningi ngokuthi "indawo yokuzalwa" ngenxa yendawo yayo ethile.
IPortella della Venere ingamamitha angama-50 ukusuka emgwaqeni omkhulu, igcwele izitolo nemizuzu embalwa ukusuka enkabeni yedolobha. Eduze kwesakhiwo kungenzeka ukuthola izinsiza ezahlukahlukene, okubandakanya indawo yokuzivocavoca, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, izindawo zobumnandi, izindawo zokucima ukoma, izitolo ezinkulu, abagwayi, amabhange nezitolo zezidakamizwa.
Lesi sakhiwo siwela ngaphakathi kwe-"Monte Cammarata" Oriented Reserve enethuba lokuthatha uhambo olude ucwiliswe ebuhleni bemvelo, kanye nokuzama ukuvakasha emigwaqweni enikeza izigaba zemvelo, ama-panorama ayela ngasocansini nokubukwa okumangalisayo. Ngaphezu kwalokho, iCammatara / San Giovanni Gemini ima emzileni we "Magna via Francigena".
Impahla igqama ngokuthanda kwayo nokunaka imininingwane, ngokunakwa, ukutholakala kanye nesizotha ekugodlele kuyo amakhasimende ayo afuna kakhulu, ahlala elalele imininingwane, ukuze anikeze isevisi emnandi neyamukelayo nokuhlala.